Mitobaka eto Antsirabe ny hosoka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Eo am-pelatanan-dry zareo kelimaso ny tsenam-barotra sy ny famokarana ireo karazan’entana sahaza ny firenena isan-tokony. Hatramin’izao, azo isaina amin’ny rantsan-tanana ireo mpamokatra televiziona sinoa, ohatra amin’izany Changhong sy ny Konka ary ny Xoceco. ireo orinasa ireo no anisan’ny manana fanamarinana ara-panjakana milaza fa marika sinoa tanteraka ny vokatra. Maro amintsika no mihevitra fa rehefa zavatra vita sinoa dia malemy sy mora simba, kanefa aza hadinoina fa ny entana elektronika tsara indrindra eran-tany dia vitan’ireo kelimaso. Ny taona 2003 no nanomboka niroborobo fatratra ny teknolojy aziatika, ka raha ny lafin’ny lafiny toekarena amin’izao fotoana izao, dia nohoaran’izy ireo ny amerikana izay tompon’ny tanjaka sy ny fifehezana an’izao tontolo izao. “Tsy afa-manohatra ny firenena an-dalam-pandrosoana manoloana io fifaninanan’ny samy ngeza io” raha ny nambaran’ny mpivarotra iray tao Antsenakely Antsirabe. Voatery manjifa ny avy any Chine ny mpivarotra hoy ihany ity mpivarotra ity, satria izay no takatry ny fahefa-mividin’ny rehetra. ny televiziona, ny finday, ny kojakoja an-dakozia tonga eto Madagasikara dia asa-tanan-dry Kelimaso, saingy araka ny fiteny mahazatra ny daholobe hoe “fôsika” ary vola ariana no hita. Mahaliana ny mpanara-baovao ny manaraka ny momba ny toekarena, tsy vao ela akory izay no tratra nanao fandikan-dalàna amin’ny fangalarana marika ny sinoa, ary tsy vao izao izy ireo no mpanao izany fa efa hatramin’izay no maka tahaka tsotra izao ny an’ny hafa ; ohatra ny fiara Mitsubishi Japone. Ny eto amintsika, hosoka sinoa ny ankabeazan’ny finday izay miely eny amin’ireny toeram-pivarotana karazana entana teknolojia ireny. Araka ny nambaran’ity lehilahy frantsay mpanao piraty amin’ny serasera izay mipetraka any Irlandy ity tamin’ny youtube http://www.leparisien.fr/diaporama-videosindex.php, dia voasazin’ny lalàna tokoa ny piraty raha tsy nahazoana alalana tamin’ny tompony, ka iray taona am-pigadrana sy mandoa onitra 45 000 euros. Rah any eto Madagasikara dia misy ny lalàna mifehy ny fangalarana ny vokatry ny asa fikarohana nataon’olona. Mikasika ny fizaka manana ara indostria dia eo any lalàna 89-019 tamin’ny 31 jolay 1989 andraiketana ny fitsipika enti-miaro ny fizaka-manana ara-indostria eto amin’ny Repoblika Demokratika Malagasy ary misy ny didy fampiharana izany. 92-993 tamin’ny 2 desambra 1992. (rohy : http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st=sb&ptb=113B6D2C-5FB1-4E31-B98B-7C891FB858AC&n=781b3b6e&ind=2015050606&p2=^JS^xdm007^YYA^mg&si=CKnplMW5rcUCFavpwgod9J0APQ&searchfor=lal%C3%A0na+89-019+tamin%E2%80%99ny+31+jolay++1989). Fa mbola eo koa ny momba ny fizaka manana ara-tsaina. Tsara ny fetsy mahay mikaroka fa misy fetrany kosa ny tokony hampiasana izany.
Hianaran’ireo mpivarotra finday ny hosoka
Misesy mihitsy tato ho ato ao Antsirabe ny olona tratran’ny finday tsy izy, izany hoe nividy hosoka. Antony maro no nahatonga ireto olona ireto tafaroboka nividy finday piraty. Ny hakantony fotsiny hoy ity mpividy ity dia nanintona azy hamoaka vola. Mandeha soa aman-tsara aloha ilay izy ao amin’ny toeram-pivarotana, fa rehefa tonga any an-trano dia maty tanteraka araka ny voalazan’ny tovolahy iray. Fomba fanaon’ny mpivarotra sasantsasany ao Antsirabe ihany koa ny tsy mamerina entana efa lafo, fa vitaina eo am-pivarotana ny andrana rehetra mikasika ilay finday na televiziona na zavatra hafa ihany koa. Mazava hoy ny ankamaroan’ny mpividy ny antony, dia te-hahalafo haingana. Ny mpamitaka sy ny mpanararaotra ihany koa etsy an-daniny efa tsy lazaina intsony. Toy ny ao Andranomaimbo, zavatra efa niasa no soloin’izy ireo fotsiny ny ety ivelany dia voafitaka ny olona, kanjo vao tsoahina ny vatoaratra dia mihintsana tsirairay ny piesin’ilay finday. Tsy vitsy ny olona no nanao fitarainana teo anivon’ny pôlisim-pirenena, ka efa nisy ireo voasambotra. Na dia izany aza, mbola tsy fongana ireo tontakely piraty ao an-toerana. Hiroso amin’ny tsara kokoa isika raha entina hamoronana ho an’ny malagasy tsivakivolo ny fahaizana manao piraty izay mitarika amin’ny tsy fifampitokisana. Ka tsy aleo ve manjifa ny vita gasy mba hifamelomana toy izay miantoraka amin’ny entan’ireo vahiny, ka manome vahana ny efa matanjaka ?